Maxkamadda Gobolka Nugaal oo sii deysay rag ku eedeysnaa arrimo Kufsi. | Somali National Television - sntv.so
Home PUNTILAND Maxkamadda Gobolka Nugaal oo sii deysay rag ku eedeysnaa arrimo Kufsi.
Maxkamadda Gobolka Nugaal oo sii deysay rag ku eedeysnaa arrimo Kufsi.
Raggan ayay maxkamaddu ay dib ugu celisay xorriyadooda, kadib markii ay shaacisay in lagu waayey dambigii lagu soo eedeeyey.
Garsoorayaasha maxkamadda ayaa sheegay in baaritaanno kala duwan lagu sameeyay todobada eedaysane, isla markaana loo adeegsaday shaybaarka dambiyada DNA-da ee loo yaqaan Forensic Lab, ayna soo saareen natiijooyin isku mid ah oo caddaynaya in aysan dambigaasi gelin.
Sidoo kale wuxuu amray in xabsiga lagu hayo eedeysanaha 7-aad oo wareysiyo hore uu bixiyey ku qirtay inuu ku lug lahaa falkaasi, si baaritaano kale loogu sameeyo Maxkamadda gobolka Nugaal ayaa fadhiyo kala duwan ka yeelatay falkan oo sanadkii hore lagula kacay haweeney lagu magacaabi jiray Hodan Axmed Maxamed Shanlayste.
Previous articleSii hayaha Wasiirka Maaliyadda oo kulan Internet-ka ah la qaatay Bankiga Horumarinta Islaamka.
Next articleAgaasimaha Hey’adda Socdaalka oo booqday bar-xuduudeedka Qeydar.